Zinedine Zidane Oo Qirtay In Isbedelkii Badnaa Ee Kooxdisa Lagu Ciqaabay.
Home Horyaalka Spain Zinedine Zidane oo qirtay in isbedelkii badnaa ee kooxdisa lagu ciqaabay.
Zinedine Zidane wuxuu qirtay in isbadalkiisa taatikada uusan aheyn mid guul ah madaama uu rajeynayay inay ka hor imaan doonaan Real Sociedad.
Tababaraha Real Madrid ayaa sameeyey isbadalo seddex jeer qeybtii hore, iyadoo goolkii furitaanka ee Cristian Portu uu ku yimid isbedelkaas.
Waan u beddelay sababta oo ah kuma faraxsani cadaadiskayaga,\_” ayuu Zidane u sheegay warbaahinta waqti buuxa Waxay aheyd 10-15 daqiiqo oo aan dib u bedelnay mar kale waxaan ku fiicneyn inaan ciyaarno 4-3-3.
Isbedelada badan ay si fiican ayey u sameeyeen ka dib markay yimaadeen Zidane ayaa ku jawaabay markii la weydiiyay hadii isbedelkiisa uu wax u dhimey Real Madrid.
Waxaan ku qasbanahay inaan wax bedelno maxaa yeelay, saacad ka dib, kooxdu way yara daashay. Mararka qaar waa inaan wax badalnaa Ugudambeyn, waxaad isku daydaa inaad hesho waxyaabo aad ku beddesho firfircoonaanta.
Natiijadii 1-1 eheed ay la galeen Real Sociedad ayaa eheed natiijo niyad jab leh oo ku dhacday Los Blancos oo maanka ku heysa kulanka axada ee ay la ciyaarayaan kooxda Atletico Madrid. Haatan waxay shan dhibcood ka dambeeyaan kooxda ay xafiiltamaan ee miiska kala sareeynta.
Waa inaan is dejino, ayuu yiri Zidane.
Waxaan ciyaarnay ciyaar fiican waxaana helnay seddex ama afar fursadood oo aan goolal ku dhalin karno.
Samir, deganaan iyo nasasho. Waxaan ka soo horjeednay koox abuuraya fursado kaa dhan ah.
Waa inaan sii wadnaa.
Ma bedeleyso sida aan u galno kulanka Derby-ga. Waa inaan halkaas u aadno si aan u helno ciyaar weyn.
Previous articleReal madrid oo iska iibineysa Bale si ay u helaan Mbappe.
Next articleDaafaca kooxda Manchester City Ruben Dias oo Tilmaamay sirta ka dambeysa guulahooda.